Taariikh nolaleedkii Baruch Spinoza – Kaasho Maanka
Spinoza aabihiis wuxuu ahaa nin ganacsiga ku fiican halka asaga oo lix sano jir ah ayay hooyadii dhimatay. Hayeeshee yaraantii wuxuu ku barbaaray korriimada dhaqanka yahuudda wuxuuna galay dugsiga Yashiva oo ah dugsi lagu barto dhaqanka iyo diinta yahuudda. Balse sanaddihii 1654-1655 markaas oo uu ahaa Spinoza 20 jir ayaa isbadal ku yimid xagga aqoonta ah asaga oo la kulmay aqoonyahankii waynaa iyo faylasuufkii xorta ahaa ee reer Faransiis Franciscus van den Enden oo ahaa macalinkiisa afka Laatiinka. Van den Enden wuxuu haa aqoon-yahanan xor ah (Freethinker) wuxuuna ahaa mucaaradka kaniisadda iyo dawladda ku dhisan kaligi-taliska boqoradda asaga oo ahaa dadka ku adag in habka dimuquraadiga laysku xukumo. Hase-ahaatee kaniisadda Kaatooliga ayaa waxay ka hortimid fikradihiisa ayada oo diiday ama mamnuucday buugaagtiisa kuna dartay buugaagta aan la daabici karin lana akhrisan Karin, dhaqnkaas oo caan ahaa xilligii kaniisaddu ku lug-lahayd xukunka.
Hadaba markaas kadib wuxuu Spinoza ka qayb galay doodo u dhaxeeyay ardadii ka socotay kooxaha masiixiyiinta ee kala duwan, doodahaas oo ku saabsanaa dabiicadda kaniisadda iyo kaalinta diinta iyo dawladda iyo dhab-ahaantii waxa ay tahay diintu ama jiritaanka awoodda kaniisadda taas oo qasab kaga dhigtay Spnoza in uu asaga naftiisu wax iska waydiyo diintiisa taas oo markii danbe uu kaga tagay rumaynta diinta yahuudda.
Sanaddii1654 waxaa geeriyooday aabhiis oo kaga tagay ganacsi iyo hanti isaga iyo walaakiis ka yar hayeeshee hantida oo dayn badan lagu lahaa wuxuu goostay in uu walaalkiis ku wareejyo asna wuxuu bilaabay barashada maadada falsafadda. Sanadadkii 1656 waxaa Spinoza laga saaray bulsha yahuudda ee daganayd magaalada Amesterdam taas oo sabab looga dhigay in uu ka baxay diinta yahuudda waxaan loo cuskaday xeerka loo yaqaan (Herem) kaas oo mamuucaya in wax xiriir ah lala yeesho Spinoza taas ayaa waxay keentay in la isku dayo in la dilo asaga oo ka badbaaday iskuday dil nin yahuudda oo xagjir ah iyo in loo diido dhaxalkii uu ka helay xoolihii hooyadii yo aabihii. Kadib markii laga saaray bulshada yahuudda waxaa xigay in dawladda Amesterdam ay ka cayriso magaalada Amesterdam.
Sannadkii 1660 wuxuu ka tagay magaalada Amesterdam asaga oo u hayaaymay magaalada Leiden ee koofurta waddanka Netherland halkaas ay ku noolaayeen aqoonyahanka iyo dadka hor-usocadka ah asaga oo ku biiray dadkii doonayay in la dhiso dawlad dimuquraadi ah, dadkaas oo uu ka mid ahaa siyaasiga caanka ahaa Johan de Witt kadib markii uu qoray buuggiisa caanka ah (Theological Political Treatise) sannadkii 1670. Buuggaas oo uu ku difaacay dawladda diinta ka madax bannaan iyo xukunka dimuquraadiga taas oo keentay in uu helo saaxiibo xagga siyaasadda iyo xagga fikradda ah. Sanadk 1670 ayuu Spinoza u guuray magaalada The Hugue asaga oo bilaabay in u qoro cilmiga falsafadda iyo fikrka. Sanadkii1677 ayuu Spinoza geeriooday asaga oo la filayo in uu ahaa 44 sano jir.